गगन थापाका नियुक्ति कोही सर्वोच्च गुहार्दै, कोही घरबार हार्दै – Makalukhabar.com
सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई बर्सेनि अनुदान बजेट दिने गर्दछ । विनियोजित बजेट सँगै थप बजेटमा वीपी प्रतिष्ठानलाई दिइने बजेट घट्दो छ । गत आवमा सरकारले वीर अस्पतालका लागि डेढ अर्ब दिँदा पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई ४० करोड दियो । त्यही अनुपातका वीपीका लागि दिनुपर्ने बजेट घटाएर १० करोड मात्र दिइएको छ । यसो हुनुको एउटै कारण हो, वीपी प्रतिष्ठानमा हुने भ्रष्टाचार । वीपीमा बजेट घट्नुमा प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. रौनियार जिम्मेवार रहेको अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन् । नाम नलेख्ने सर्तमा एक कर्मचारीले प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. रौनियारले गरेका विभिन्न गलत कामको नियमित रूपमा धरानबाटै रिपोर्टिङ आउने गरेकाले अर्थमन्त्री समेत रुष्ट छन् । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका नजिकका मान्छे भनेर चिनिने वीपी प्रतिष्ठानका कर्मचारी तदर्थ समितिका संयोजक राजन कोइरालाले उपकूलपतिले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू अर्थमन्त्रीलाई पु¥याउने गरेका छन् । उनी अर्थमन्त्रीका विस्वासपात्र हुन् ।